1 Tantara 14 - Ny Baiboly
1 Tantara toko 14
Ny nandresen'i Davida ny Filistina.
1Ary Hirama mpanjakan'i Tira, nandefa iraka tany amin'i Davida nitondra hazo sedera sy tambato ary mpandrafitra, hanao trano ho azy. 2Dia fantatr'i Davida, fa efa nampiorina azy ho mpanjaka amin'Israely Iaveh, satria voasandratra ny fanjakany, noho Israely vahoakany.
3Mbola naka vady koa Davida tany Jerosalema ka mbola niteraka zazalahy aman-jazavavy. 4Izao no anaran'ny zanany naterany tany Jerosalema: Samoà, Sobada, Natana, 5Salomona, Jebahara, Elisoa, 6Elifaleta, Nefega, Jafia, 7Elisamà, Baniadà ary Elifaleta.
8Ren'ny Filistina fa hoe voahosotra ho mpanjaka amin'Israely rehetra Davida; dia niakatra hitady an'i Davida ny Filistina rehetra. Nahare izany Davida ka dia nivoaka hanoloana an'ireo izy. 9Nony tonga ny Filistina dia nirotsaka teny amin'ny lohasahan'ny Refaima. 10Nanontany an'Andriamanitra Davida nanao hoe: Hiakatra hamely ny Filistina va aho? Hatolotrao eo an-tànako va izy? Ka hoy Iaveh taminy: Miakara, ary hatolotro eo an-tànanao izy. 11Dia niakatra nankany Baalal-Farasina izy ireo ka nandresy azy tao Davida. Ary hoy Davida: Ny tànako no namakian'Andriamanitra ny fahavaloko, toy ny amakian'ny rano ny fefiloha. Izany no nanaovana ny anaran'io fitoerana io hoe: Baala-Farasina. 12Nilaozan'irerý tao ny andriamaniny, ka nasain'i Davida nodorana tamin'ny afo.
13Nirotsaka indray ny Filistina teny amin'ny lohasaha. 14Dia nanontany an'Andriamanitra Davida, ka hoy Andriamanitra taminy: Aza miakatra manaraka azy fa mivilia azy, ary hivarina aminy hianao avy eo amin'ny lafiny misy ny balsamie. 15Ka rahefa mandre figondongodon'olona any an-tendron'ny balsamie hianao, miroata hiady amin'izay, fa Andriamanitra hivoaka mialoha anao hamely ny tafiky ny Filistina. 16Dia nataon'i Davida izay nandidian'Andriamanitra azy, ka nandresy ny tafiky ny Filistina, hatrany Gabaona ka hatrany Gazera izy ireo.
17Dia niely eran'ny tany rehetra ny lazan'i Davida, ary nataon'ny Tompo natahotra azy ny firenena rehetra. >